Nzwisisa Zvinokurudzira neApplied Psychology Degree »Yunivhesiti yeHodges
Categories: jaya, Featured, Nhungamiro yepamhepo, Psychology
Bachelor's Degree muApplied Psychology
Pamusoro 10 Zvikonzero Iwe Unofanirwa Kuwana Bachelor's yeSainzi muApplied Psychology kuHodges U:
Makosi anosanganisira akavezwa fomati yemavhidhiyo akarekodwa, uye iwe unogona kutora chikamu mukurarama-chat hurukuro kupa nzira yezviitiko zvakagovaniswa munzvimbo chaiyo.
Yokudzidza maitiro evanhu, uye kukurudzira sei vamwe kuburikidza nemapurojekiti akasiyana siyana, uye nhaurirano, kusanganisira inodiwa yemudzidzi kirasi ye "Ongororo Psychology"
Dzidzai nzira yesainzi kuseri kwepfungwa.
Ita hunyanzvi hwekufunga kwakasimba uye shandisa pfungwa dzepfungwa kumatambudziko ekugadzirisa matambudziko.
Simbisa zvese zviri zviviri zvekutaurisa uye zvekunyora kuburikidza nekukurukurirana kwekirasi, zvirongwa zveboka, uye zvinyorwa.
Dzidza maitiro ekuendesa vatengi kumatunhu enharaunda zvinoenderana nemamiriro avo uye mutengi zvido.
dzidza masimba-based nharaunda anosvika yekubatsira vanhu vanoshaya.
Shingairira mukati nharaunda dzekudzidza chaidzo kubatsira iwe kuchengetedza ruzivo kuburikidza neyedu hurukuro dzekudyidzana uye zvekufananidza.
Minda Iyo Vanopedza Kudzidza Vanogona Kushanda:
Population Vakapedza Kudzidza Vanogona Kushanda Na:
Kushandisa Zvinodhaka Kupa Counselling Bhadhara Chikero uye Maonero
BS muApplied Psychology Degree Sequence
Akanaka Makoreji: Yakanakisa Pamhepo Bachelor muApplied Psychology Zvirongwa
Zvikoro Zvakanakisisa: Iwo Akanakisa Pamhepo Makoreji muFlorida
Koreji Chaizvoizvo: 2020 Yakakurumbira Clinical, Counselling & Yakashandiswa Psychology Zvikoro
Iyo Nongedzo kune Zvikoro zvepamhepo. 2020 Yakanakisa Pamhepo Makoji muFlorida
University: Akanakisa Mental Health Counselling / chipangamazano Makoreji muFlorida
Zvikoro zvepaInternet Center: Wepamusoro Akabvumidzwa Pamhepo Makoreji e2020
Zvikoro zvinodhura: 25 Yakawanda Inodhura Pamhepo 4-Gore Latinx / Hispanic-Inoshandira Makoji
Tsvaga Kwedu Degree Degree Zvirongwa
Cheryl Gonzales: BS muApplied Psychology
Handina kumbofunga kuti zvaigona kuti ndiwane dhigirii kubva kuyunivhesiti chaiyo. Kutenda kuchinjika kwezvirongwa zvepamhepo paHodges University, Ini ndiri makosi maviri kubva pakupedza degree rangu reBachelor's muApplied Psychology uye ini ndaisakwanisa kuzvikudza ini!
Kutanga pane yako #MyHodgesStory nhasi.